Internationalization, Localization, Encoding, Iceland uye Dudziro yeJapan Cat Mifananidzo Webhusaiti | Martech Zone
Kune ruzivo rwakawanda kunze uko kana zvasvika kune yekudyidzana, kwenzvimbo uye encoding mukati mewebhu kunyorera. Kune zvakare kusanzwisisa kwakawanda pamusoro peizvo imwe neimwe inopa yewebhu kunyorera. Heino kutora kwangu…
Kana bhurawuza rewebhu rikaita kubatana kune webhu server, iyo inopfuura yakati wandei misiyano uye inoita zvimwe zvikumbiro, heino muenzaniso:
Mushandisi-Mumiriri: Mozilla / 5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv: 1.8.1.3) Gecko / 20070309 Firefox / 2.0.0.3
Gamuchira: HTTP Gamuchira = zvinyorwa / xml, application / xml, application / xhtml + xml, text / html; q = 0.9, text / plain; q = 0.8, image / png, * / *; q = 0.5
Gamuchira-Mutauro: en-us, en; q = 0.5
Gamuchira-Encoding: gzip, deflate
Kudyidzana kusanganisa zvinhu zvakawanda:
Nzvimbo: Iko kugona kuziva kuti ndeupi mutauro uye nzvimbo mushanyi ari kushanya kubva. Izvi zvinoitwa kuburikidza neHTTP Zvikumbiro uko mushanyi anozivikanwa nenzvimbo. Mune yangu kesi, izvo zviri en-US. "En" ndiChirungu uye "US" iUnited States. Uku ndiko kuiswa mukati meYangu Inoshanda Sisitimu.
Nzvimbo dzenguva: Iko kugona kugadzirisa kwenzvimbo dzenzvimbo. Izvi zvinowanzoitwa nekumisikidza server yako kuGreenwich Zvinoreva Nguva (GMT) uye wozobvumira vashandisi kumisikidza yavo yemunharaunda kubva kuGMT.
Hunhu Encoding: Uku ndiko kugona kuratidza hunhu hwemitauro inoiswa nemazvo. Zvakasiyana nekushandisirwa nzvimbo nekuti nharaunda inogona kundiudza mutauro nedunhu rekomputa iri kuita chikumbiro kubva, asi hazvindiudze mutauro muverengi iri kukumbira… izvo zviri kumuravi!
Cherekedza mune yangu HTTP Musoro apo bhurawuza rakaita chikumbiro, rakaudza server kuti yaikumbira nzvimbo yangu (Gamuchira-Mutauro: en-us); zvisinei, inodawo kutaurira server izvo hunhu seti inodiwa (Gamuchira-Charset: Gamuchira-Charset: ISO-8859-1, utf-8; q = 0.7, *; q = 0.7) ISO-8859-1 uye utf -8 ese ari maviri anotenderwa hunhu seti.
Mune ino inonakidza yakavhenganiswa nyika, localization haichazotauri mutauro zvakare. Kunyangwe ini ndiri mu en-US, ndinogona kuverenga zvachose mutauro wakasiyana ndichishandisa imwe yakasarudzika hunhu… ndizvo zvinoitika kana ini ndoshandisa Google Hindi (Ini handinyatsoshandisa Google Hindi). Chikumbiro changu yenzvimbo uye hunhu seti zvakafanana nepandinokumbira iyo Google Chirungu peji, asi ndiri kunyatsodyiswa peji randisingakwanise kuverenga nekuti ini handina hunhu hwakaiswa. Zvese zvinouya ???????????? ... Zvisinei, ini ndinogona kurongedza hunhu hwakamisirwa muFirefox (Firefox> Zvaunofarira> Zvapamberi> Mitauro):
Kana ndikatakudza mutauro iwoyo, ndinogona kukumbira iyo peji mune yayo yemuno yakasetwa set uye kuiratidzira pakombuta yangu kunyangwe yangu default nzvimbo iri en-US!
Saka… kana ndiri mudzidzi wechiHindi, ndichidzidza Chirungu kuPurdue uye ndakabatana kuburikidza VPN kuseva yechikoro, pazororo kuAustralia… kune matatu marongero akasiyana ayo anofanirwa kuiswa kuchikumbiro kuti zvive zvechokwadi zveMunyika - uye hapana kuvimba neimwe.
Nzvimbo yangu yaizouya se en-US, asi nguva yangu yenguva iAustralia, asi mutauro wandirikukumbira kubva pawebhusaiti unogona kunge uri wechiHindi. Dai ndaizoronga chikumbiro changu kuti ndiite fungidziro zvinoenderana nekombuta yekwamunzvimbo, ndinenge ndakanganisa zvachose - kudyisa munhu uyu Chirungu munzvimbo yekumabvazuva. Zvakanakisa, ini ndaizoronga chikumbiro changu kuti ndipe zvose zviri zviviri mitauro nenzvimbo dzenguva… asi ini handidi kuzvitora zvichibva nenzvimbo.
Iceland - muenzaniso wekupedzisira
Isu hatizive nezve akawanda-mitauro uye akawanda-enzvimbo matambudziko muUnited States matiri zvose taura Chirungu [sarcasm implied]. Mune dzimwe nyika, senge Iceland, kunyangwe mutauro wemuno chiIcelandic, vanhu vanoshamisa veIceland vanokura vachidzidza mitauro mitatu! Sezvo Iceland iri nyika iri pakati peEurope neNorth America, makambani avo anoshanda mumakondinendi akawanda, mitauro, madudziro emitauro uye akawanda nguva yenguva kubva kudesktop yavo!
Mazhinji mawebhusaiti eIcelandic akavakwa muUS Chirungu, UK Chirungu, Icelandic, Spanish, Spanish, French neGerman! Chimbofungidzira kuti zvingave zvakaoma sei kuvaka Icelandair's webhusaiti kunyorera uye matiketi masisitimu… wow!
KUSVIRA: Ndakave nemufaro wakazara wekushanda pamwe nevanhu vakanaka kubva kuIcelandair uye ndinogona kukuudza kuti ndivo vamwe vevane tarenda uye vane hunyanzvi nyanzvi ini ndakave nemufaro wekushanda navo. Ingori inoshamisa nyika nevanhu! Enda unoshanya… tora Icelandair uye uve nechokwadi chekushanyira iyo Blue Lagoon!
Mutauro maringe neKodhi
Kune akatosiyana maitiro encodings mukati memutauro mumwe chete asingatambe nemazvo nemumwe! Semuenzaniso: E-mail yeJapan yakanyorwa muShift-JIS inogona kupa isingaverengeke pakombuta yemunhu wechiJapan nenzvimbo yakaiswa kuJa-JP nekuti yavo mail server inongoziva EUC-JP. Sezvineiwo, mutengi anofanira kukwanisa kuseta encoding yavanoda pamwe nemutauro upi - kungoona kuti encoding nemutauro zvinoenderana nezviri kukumbirwa nemutengi.
Kana ndichida kuverenga chiJapanese, ndinogona kusarudza maJapanese semutauro wangu uye Shift-JIS yekukodha kuratidza iwo mutauro nemazvo. Heano mamwe manyonganiso ekuwedzera kumusanganiswa… mamwe marudzi ekodhi anotsigira mitauro yakati wandei. UNICODE / UTF8 inotsigira gumi nemaviri. Izvo zvinodzoka ndezvechokwadi futi. Mimwe mitauro inogona kuverengerwa mumhando dzakawanda dzekunyorera. Kana izvozvo zvisina musoro… ndinokumbira ruregerero, inyaya yakaoma kwazvo.
Rimwe zuva ndinotenda (ndinovimba) izvi zvese zvichachinja. Ini ndinofunga ivo vekutanga vagadziri vemunharaunda makodhi vaitarisira kuti mutauro-nyika combo ichave zvese zvinodikanwa… asi isu tave takanyanya kuomarara. Rangarira, zvakawanda zveizvi zvakagadzirwa pasati pave neInternet. Nekuuya kwe GIS, pamwe munhu anogona kusarudza encoding yavo uye GIS yaizobata nguva nenzvimbo ruzivo.
Dzokera kuInternationalization rutsigiro. Kana iwe uchida kupa Internationalized application, unofanirwa ku:
Tsigira akawanda encoding mhando, mitauro, uye uine dudziro mafaira kuratidza iwo maBhaibheri.
Bvumira mutengi kumisikidza mutauro wavo, uye kunyangwe pamwe yavo mhando yekodhi, kana zvichidikanwa.
Tsigira nguva dzenzvimbo nekutendera vashandisi kudoma yavo yenguva nguva mukuenzanisa neGMT.
Shandisa macode enzvimbo nekuchenjerera… HAVANYORESE zvakanyatsonaka izvo mushandisi zvauri kukumbira kana zvavanogona kuverenga.
Shanduro yemuchina ichiri mudiki. Kune akati wandei mawebhusaiti kunze uko (uye WordPress Plugins) iyo inopa mushanduri shanduro yako saiti. Usaedzwa kuti uite izvi… pane zvikonzero zviviri nei:
Kana shanduro yemuchina ikashanda, mushandisi ari kuongorora yako saiti anenge atove nemuturikiri wekushanda naye.
Shanduro yemuchina inoyamwa.
Usanditenda? Heino shanduro yechiJapan yako:
Yakanamirwa kubva Masatsu File - murume ane toni yemifananidzo yekatsi:
Japanese Blog Kupinda
Zita remutsvene chibhakera che / nzou yakaonekwa nezuro "a / chikara chibhakera chikepe ?? Ranger "" ?? Hann ???? ” pamwe / newairesi mutambi Yutaka Mizushima….
? (?) iyo inoita cuttlefish nyore.
Nekuti kunyangwe iye redhiyo mutambi wetsiva chibhakera, tenzi ??? ye / iyo katsi ndeyeChinese quince yeNagai Ichiro = dhiragoni bhora mudonzvo we / iyo ?? Ranger anotaridzika sevanhu vanopenga kutaura vanoziva zviri nyore.
?????? (ziya ziya) randakanga ndichikanganwa zvachose gore rino "chakavanzika chezita remafambisi makuru", eanowanzoitwa makore ese?
Kana ndikanyora zvine mutsindo gore rino,
??????? shrine ??? (unogona sei?)? headland cullion (?? cheka kwete) Fukami ?? (? kana kucherechedza kugona?) iyo / ndizvo zvazvinoita
?????? Na, inova "kani /? /?", Mune mamwe mazwi, "kung fu", kana uchisimuka uye uchichinja musoro we / wezita.
?????? Kunyangwe zvichinzi kuwedzera mamwe maviri anonzi anogona kuve ezita ripi.
Ichokwadi chinonzi "zera" nekuti sirivheri element chiratidzo ndiAg?, Kunyangwe zita rekuti "iro ???? sirivha ”the Takaoka? technician ye ??????? anga achifunga kuti hunhu hunodaidzwa "?" yakashandiswa pamwe nekubatana kwesirivha'screen? bhaisikopo, kana ichichidaidza nenhengo yekuwedzera.
?????? Zvisinei, ndiri kufunga zvine udyire, kuti dzidziso yangu haina hukama naiyo "?" inowanikwa mu / chimiro cheChinese.
Ndine chokwadi chekudzora polarity pane iyi dudziro yaizopa sekungoverengwa duramazwi muChirungu. Iwe wakanzwisisa kupinda, handiti?
Tags: character encodingicelandairkudyidzana kwenyikavemunzvimbolocalizationnguva dzenguvashanduro
WordPress Yekubatana Fomu neSpam Dziviriro Shanduro 2.0.0 Yakaburitswa!
Google Analytics inowana Runako Rwekuzivisa Chinyorwa (Beta)
waireva Purdue here?
Chokwadi - ziya dikita redhiyo mutambi aishaya nzira chaiyo yekutaura zvimwe zvinhu….
Ini chokwadi ndakazviita! Ndatenda, Christine!